YEYINTNGE(CANADA): Sunday, September 14
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မိသားစု ဆရာဝန် ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း ဒီနေ့ မွန်းလွှဲ ၂နာရီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်မှာ သွားရောက် တွေ့ ဆုံတာ လေးနာရီခွဲ ကြာတယ်လို့ ရန်ကုန်ကလာတဲ့ AFPသတင်းက ဆိုပါတယ်။ ပြင်ပက ပို့တဲ့ အစားအစာများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်မခံတာ တလလောက် ရှိသွားပါပြီ။ အရင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့  ရှေ့ နေ ဦးကြည်ဝင်း သွားတွေ့ တုန်းကတော့ မိသားစုဆရာဝန်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါ အစားအစာများ ပြန်လည် လက်ခံဖွယ် ရှိတယ်လို့ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောခဲ့ဖူး ပါတယ်။ အခု ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနဲ့ တွေ့ ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ် ဘာမှ မသိရသေးပါဘူး။
စနေနေ့တုန်းကလည်း ဦးကြည်ဝင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့  နေအိမ်မှာ သွားရောက် တွေ့ဆုံပြီးတော့ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်ရေး အယူခံ မူကြမ်း သွားပြကာ အတည်ပြုချက် ရယူခဲ့ကြောင်း အယူခံလွှာကို အစိုးရထံတနင်္လာနေ့သို့မဟုတ်အင်္ဂါနေ့မှာတင်သွင်း မယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ချက်ချင်း လွတ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါ တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတာ ဆယ့်သုံးနှစ် ရှိသွားပါပြီ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/14/20080အကြံပြုခြင်း
Invitation - Cyclone Donors Appreciation and Special Prayer Service September 28
စက်တင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈
နာဂစ်မုန်တိုင်း၊ သန်းရွှေမုန်တိုင်းအောက်မှာ ပြိုလဲပျက်စီးသွားရတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကြီးကို ကြည့်ရင်း ဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သွားခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ကို ကျနော် ပြန်အမှတ်ရလာပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက အင်အားတက်ကြွ၊ တိုးတက်လှတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာတွေ၊ တိုးမြစ်၊ ရွေးမြစ်၊ ပြာမလော့မြစ်၊ မြောင်းမြမြစ်၊ င၀ံဖြစ်တွေရဲ့ မြင်ကွင်းတွေဟာ ကျနော့်အာရုံမှာ ထင်ဟပ်လာပါတော့တယ်။
၁၉၈၉ ဇန်န၀ါရီ၊ နှင်းတွေနဲ့ ဝေနေတဲ့အချိန်ပါ။
ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေ တလူလူနဲ့ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းက ထွက်ခွာလာတဲ့ ‘မြတ်မေတ္တာ’သင်္ဘောကြီးဟာ တိုးမြစ်ရင်ခွင်ထဲကို တိုးဝင်လာနေပါပြီ။ ဧရာဝတီတိုင်းနယ်မြေထဲကို ကျနော်တို့ စတင် ၀င်ရောက်လာနေကြတာပါ။
ကျနော်တို့ ပထမဆုံး ဆိုက်ကပ်ရမယ့် ဆိပ်ကမ်းက ‘ထနီး’ဆိုတဲ့ မအူပင်မြို့နယ်အ၀င်က ရွာကလေးပါ။ ဒါ စစ်ပဒေသရာဇ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်ရဲ့ နတခ ဧရိယာအစပ်ပေါ့။ (အဲဒီတုန်းက စစ်ဧကရာဇ်ကြီးကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ပါ။)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီ ဧရာဝတီတိုင်း အနောက်ခြမ်း ပုသိမ်၊ မြောင်းမြ၊ ဟင်္သာတ ၃ ခရိုင် ခရီးစဉ်မှာ အန်ကယ် ဦးကြည်မောင် လိုက်ပါလာပါတယ်။ ကာနယ်ကြည်မောင်လို့ လူသိများတဲ့ ဦးကြည်မောင်ဟာ ၁၉၃၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ တတိယ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်တိုက်ပွဲတုန်းက တပ်ဦးမှာ အလံကိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တဦးပါ။
အဲဒီနေ့က အတွင်းဝန်ရုံးရှေ့မှာ ဗိုလ်အောင်ကျော် အရိုက်ခံရတဲ့နေ့ပေါ့။ အဲဒီနေ့က ဦးကြည်မောင်နဲ့အတူ အလံကိုင်ခဲ့တဲ့ အမာခံ ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တဦးကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ဆရာ ဒဂုန်တာရာပါပဲ။
အန်ကယ် ဦးကြည်မောင်ဟာ ဦးအောင်ကြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးတို့ ‘အောင်-စု-တင်’ ဆိုပြီး NLD ပါတီ စထောင်စဉ်အချိန်က ဦးအောင်ကြီးအဖွဲ့ထဲကပါ။ ပါတီဖွဲ့ပြီးလို့ သိပ်မကြာလိုက်ဘူး၊ ဦးအောင်ကြီး နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးကြည်မောင်က ဦးအောင်ကြီးနောက် ပြန်ပါမသွားဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦးတို့နဲ့ NLD မှာပဲ နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ကာလ၊ ၁၉၉၀ မေလ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အနိုင်ရအောင် ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာ အန်ကယ်ဦးကြည်မောင်ပါပဲ။
သင်္ဘောက ဆိပ်ကမ်း ကပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ဥသြသံ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အားလုံး အသင့်ပြင်လိုက်ကြပါပြီ။
“အိုဘယ့်ဘယ် … အိုဘယ့် ဧရာဝတီ၊ သင်သည် စီးဆင်း၊ တို့ရင်တွင်းမှာ၊ နှင်းဆီပွင့်တွေ၊ ရဲရဲကြွေပြီ၊ ဝေလည်းရဲရဲ၊ ကြွေရဲရဲမို့၊ နီနီရဲရဲ၊ သင့်အသည်းကို၊ မခွဲတုံလော … ခွဲတုံလော။” ခရီးစဉ်မှာ ဖြန့်ဝေဖို့ ပါလာတဲ့ ကျနော့်ကဗျာစာအုပ်ကလေးကို ကျနော် ကိုင်ကြည့်နေမိတယ်။
သင်္ဘောတစင်းလုံးဟာ တက်ကြွ ရွှင်လန်းနေတော့တာပါ။ ပထမဆုံး ဆိုက်ကပ်မယ့် ဆိပ်ကမ်းလည်းဖြစ်လို့ ရင်ခုန် စိတ်စောနေကြပုံလည်း ရပါတယ်။ တိုးမြစ်ကြီးကတော့ ညင်ညင်သာသာ စီးဆင်းနေတုန်းပါ။
ဒီခရီးစဉ်မှာ ကျနော်က ‘ပွိုင့်’တာဝန် ကျပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းတခုကပ်တာနဲ့ ကျနော် အရင် ရှေ့ပြေးဆင်းရမယ်။ ကျနော့်နောက်မှာ ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်ရှိမယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဲဒီလို အမိန့်ပေးထားပါတယ်။
ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန်ဆိုတာ ၁၉၇၆ တုန်းက ဦးနေ၀င်းကို လုပ်ကြံပြီး အာဏာသိမ်းဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့်တို့ရဲ့ အမှုတွဲပါ။ အခု ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန် အကျဉ်းထောင်တခုထဲမှာ နှစ်ရှည်လများ ထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲပါ။
န၀တ စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုနဲ့ NLDရဲ့ အားစမ်းပွဲကတော့ စပါပြီ။ ထနီးရွာဟာ ကျနော်တို့ ပထမဆုံး ဆိုက်ကပ်မယ့် ဆိပ်ကမ်း။ တနည်းအားဖြင့် ပထမဆုံးတိုက်ပွဲလည်း ဖြစ်တယ်။ ပထမဆုံး တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဟာ မနိုင်ရင်သာနေရမယ်၊ မရှုံးစေရဘူး။ ပထမဆုံးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲဟာ မနိုင်ရင်သာနေရမယ်၊ မရှုံးစေရဘူး။
ကျနော်က သင်္ဘောပေါ်မှာ ပါလာတဲ့ သုံးရောင်ခြယ် နဲ့ NLD လူငယ်တွေကို ၁၉၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ရခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံအရ ဒီစကား ကျနော် ပြောလိုက်ပါတယ်။
ထနီးရွာကမ်းပါးတလျှောက်မှာတော့ ကရင်တိုင်းရင်းသား ရွာလူထုဟာ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံတွေ၊ ဒုံးယိမ်းအကတွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုနေကြပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း သင်္ဘောအပေါ်ထပ်ကနေ လက်ပြ နှုတ်ဆက်နေပါတယ်။ မအူပင်ကလာကြိုတဲ့ NLDမြို့နယ်စည်းတွေကိုလည်း ရွာလူထုကြားမှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
အပေါ်နဲ့အောက် ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ဝှေ့ယမ်းလို့ပေါ့။
သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းကပ်လို့ ကြိုးချည်၊ ကုန်းပေါင်ထိုးပြီးတာနဲ့ ကျနော် အရင်ဦးဆုံး သင်္ဘောပေါ်က ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ” လူထုရဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေ ကြားမှာပဲ လက်နက်ကိုင်စစ်သား တပ်စုတစုနဲ့ အသင့်စောင့်နေတဲ့ အရာရှိ စစ်ဗိုလ်ဆီကို ကျနော် တန်းတန်းမတ်မတ် လျှောက်သွားပါတယ်။ ကျနော် သူ့ကို လေးစားသမှုနဲ့ အရင် နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူနဲ့ကျနော် ညှိကြနှိုင်းကြ လုပ်ရပါတယ်။
တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင် ပေးထားတဲ့ အမိန့်အတိုင်း အဲဒီစစ်ဗိုလ်က တသဝေမတိမ်း လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေးထားတဲ့ အမိန့်အတိုင်း လုပ်တာပါ။ ဘယ်အမိန့်က တရားသလဲ။ ဘယ်အမိန့်က မတရားဘူးလဲ။
ညှိလို့နှိုင်းလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီး သင်္ဘောပေါ်က ဆင်းလာပါပြီ။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ” ကရင်တိုင်းရင်းသား လူထုကြီးဟာ အဆက်မပြတ် ကြွေးကြော်နေပါတော့တယ်။
ထနီးရွာ NLD ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားကြီးတဦးနဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသူကြီးတဦးတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပန်းကုံးစွပ်ပြီး ကြိုဆိုကြပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အို ဖထီးတချို့၊ အမိုးတချို့ဟာ ‘ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်သမီး၊ ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်သမီး’ ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖက်ပြီး ငိုကြပါတော့တယ်။
ကျနော်တို့ ရင်ထဲမှာ ကြေကွဲပီတိကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မျက်ဝန်းမှာလည်း မျက်ရည်စတွေနဲ့ပါ။
ထနီးရွာမှာ ကျနော်တို့ ကြာကြာ အချိန်မရပါဘူး။ မအူပင်မြို့ကို ခရီးဆက်ရပါဦးမယ်။ ရပ်ရွာလူထုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောပြီးတဲ့အခါ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပြီး သင်္ဘောပေါ် ပြန်တက်ကြပါတယ်။ အန်ကယ်ဦးကြည်မောင်ကတော့ ရှေ့မထွက်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘေးမှာ ရပ်ပြီး ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ကျေနပ်အားရနေတော့တာပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ထနီးရွာလူထု တသားတည်းဖြစ်သွားတာကိုကြည့်ပြီး အစ ပထမက တမင် ခက်ထန် တင်းမာအောင် လုပ်ယူထားရတဲ့ စစ်သားတွေရဲ့ မျက်နှာဟာ တဖြည်းဖြည်း ပျော့ပျောင်းလာတာကို ကျနော် သိတာပေါ့။ ကျနော် စစ်တပ်ထဲမှာ အနှစ် ၂၀ ကျော် ကြီးပြင်းလာတဲ့သူပဲ။
သင်္ဘောပေါ်ကို ကျနော် နောက်ဆုံးမှ တက်ပါတယ်။ မတက်ခင် အရာရှိစစ်ဗိုလ်ကို “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗိုလ်ကြီး”လို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ထနီးဆိပ်ကမ်း၊ တိုးမြစ်ဝှမ်းပေါ်မှာတော့ ဒုံးယိမ်းသံတွေက ညံနေဆဲ၊ ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေက တလူလူ လွင့်ပျံနေဆဲပါပဲလေ။
(မူရင်း - RFA)
ထိုင်း ယာယီ အစိုးရက အရေးပေါ် အုပ်ချုပ်ရေးကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်း
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေ ပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက် အရေးပေါ် အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားတာကို အခုအခါမှာ အစိုးရက ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။ အတိုက်အခံတွေရဲ့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြမှုတွေကြားက ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရာထူးက ဆင်းပေးခဲ့ရသလို၊ ဒီလို အရေးပေါ် အခြေအနေတွေကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုက်လို့ အခြေအနေ တချို့ တည်ငြိမ်သလို ရှိလာခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒါဟာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေ အဆုံးသတ် ပြေလည်သွားမယ့် လက္ခဏာတော့ မဟုတ်သေးဘူးလို့ နိုင်ငံရေး အကဲခတ်တွေက ရှုမြင်နေကြဆဲပါ။ အကြောင်းစုံကို ကိုအောင်လွင်ဦး က တင်ပြထားပါတယ်။
ထိုင်း အိမ်စောင့်အစိုးရရဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ မစ္စတာ ဆွန်မ်ချိုင်း ဝေါင်ဂ်ဆ၀တ် (Somchai Wongsawat) က အရေးပေါ် အုပ်ချုပ်ရေး ကြေငြာထားတာကို အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်း ဖြေရှင်းကြဖို့ ဒီကနေ့ပဲ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေအတွင်း ဆန္ဒပြသမားတွေက ထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဆမတ် ဆွန်ဒရာဝေ နှုတ်ထွက် သွားတာ၊ အခုလ ၂ ရက်နေ့ကတည်းက ကြေငြာထားခဲ့တဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေတွေ ရုပ်သိမ်း လိုက်တာတွေကြောင့် လတ်တလော အခြေအနေတွေဟာ အေးဆေးသယောင် ရှိနေတယ်လို့လည်း ထိုင်းနိုင်ငံက သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ လနဲ့ချီ ဖြစ်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေ အဆုံးသတ်သွားပြီလို့တော့ မမှတ်ယူနိုင်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံက နိုင်ငံရေး အကဲခတ် တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဝင်းမင်း က ဆိုပါတယ်။
“စစ်တပ်ရဲ့ အရေးပေါ် ဥပဒေကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တာက အဓိက အချက် ၂ချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချက်က လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာက နိုင်ငံရေး ဧည့်သည်တွေ လာတာ နည်းသွားတဲ့အတွက် နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်တွေ ပြန်လာနိုင်ဖို့ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်သွားတာကို ပြချင်တဲ့အတွက် အခုလိုမျိုး မြန်မြန်ဆန်ဆန် စစ်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ နောက်တခုက စစ်တပ်အနေနဲ့က လက်ရှိပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရ အဖြေရှာစေချင်တဲ့အတွက် စစ်ဥပဒေ ထားထား တာကို သူကိုယ်တိုင်က မကျေလည်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ အဲဒီ နှစ်ခုအောက်မှာ စစ်ဥပဒေ လတ်တလော ရုပ်သိမ်းသွားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားပြီလို့တော့ ချက်ချင်းပြောရ ခက်ပါသေးတယ်။ ဆိုးလာဖို့ အလားအလာ ရှိနေသေးတယ်လို့ သုံးသပ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အာဏာရ ပီပီပီ ပါတီအနေနဲ့က ပြန်စာရင်းတင်သွင်းတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်အသစ်က အထူးသဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ် တက်ဆင်နဲ့ အရမ်းနီးစပ်ပြီးတော့ ပီပီပီ ပါတီမှာ ၀န်ကြီးချုပ် တက်ဆင်ရဲ့ ကြိုးဆွဲမှုကို ခံရတဲ့သဘော နောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့ ထောက်ခံမှုပေးတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်များများကတော့ ကျေနပ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆန္ဒပြသူတွေ အနေနဲ့ကလည်း ပီပီပီ ပါတီက ဘယ်သူပဲ တက်လာတက်လာ ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ပြဿနာတွေ လုံးဝဖြေရှင်းသွားလိမ့်မယ့် အနေအထားမျိုးကတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။”
လတ်တလောမှာတော့ လက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ မစ္စတာ ဆွန်မ်ချိုင်း က သူ့ရဲ့ ပြည်သူ့အာဏာပါတီ (PPP) ထဲက ကျန် ၂ ယောက်ထက် အသာရနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (PAD) က ဒီပါတီထဲက ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီး သတိပေးထားတာတွေ ရှိနေသလို ၀န်ကြီးချုပ်သစ် အဖြစ် ရွေးချယ်ဖို့ ထိပ်ကပြေးနေတဲ့ မစ္စတာ ဆွန်မ်ချိုင်း ကိုယ်တိုင်ရဲ့ နိုင်ငံရေး နောက်ခံအရ လက်မခံနိုင်ဖွယ်ရာတွေ ရှိနေလို့ ပြဿနာတွေ အေးသွားစရာ မမြင်ရသေးဘူးလို့လည်း ကိုဝင်းမင်း က ယူဆပါတယ်။
“သူကိုတော့ တော်တော်များများ အထူးသဖြင့် ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် ၀န်ကြီးချုပ် တက်ဆင်နဲ့ အရမ်းနီးစပ်တယ်လို့ ယူဆကြမှာဖြစ်တယ်၊ ယုံကြည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင်ရဲ့ ညီမကို ယူထားတဲ့ ယောက်ဖဖြစ်နေတာကိုး။ သူ့အနေနဲ့က တော်တော်လေး နီးစပ်မှုရှိနေတဲ့အတွက် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဆမတ်ကို ဆန္ဒပြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင်နဲ့ နီးစပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်တာကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲတွေက ပိုပြီး ဆက်ပြီး ဖြစ်နေဖို့ များပါတယ်။ ပြဿနာတွေ ပြေလည်သွားဖို့ အလားအလာ နဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မစ္စတာ ဆုံချိုင်းအနေနဲ့က အရင် တရားသူကြီး လုပ်ခဲ့စဉ်ကာလက မှတ်တမ်းကောင်းခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း တက်ဆင် အာဏာရလာပြီးတဲ့နောက် တရားရေး ၀န်ကြီး ဌာနမှာ ပိုပြီးတော့ အရေးပါတဲ့ နေရာကနေ လုပ်လာရတဲ့အတွက် အဲဒီကာလမှာတော့ ၀န်ကြီးချုပ် တက်ဆင်နဲ့ နီးစပ်ခဲ့တဲ့အတွက် အများစုကတော့ သူ့ကို ၀န်ကြီးချုပ် တက်ဆင်နဲ့ နီးစပ်ခဲ့တယ်လုိ့ သုံးသပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။”
ရာထူးက ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဆမတ် ရဲ့ နေရာကို အစားထိုးဖို့ အတွက်ကိုတော့ လက်ရှိ ညွန့်ပေါင်း အစိုးရက ဒီတပတ်ထဲမှာပဲ ရွေးချယ် အမည် စာရင်းတင်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့တုန်းက လွှတ်တော်ထဲမှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ ဖြစ်ပေမယ့် (PPP) ပါတီက မစ္စတာ ဆမတ် ကိုပဲ နောက်ထပ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့ရာက ကန့်ကွက် သပိတ်မှောက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့အပြီး အခုလို နောက်တကြိမ် ရွေးချယ်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ ခင်ဗျာ။
စစ်တွေမှာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမရုပ်ပုံပါ တီရှပ်တိကို ၀တ်ဆင်သူ အနည်းဆုံး လူငယ် ၆ ဦးဖမ်းဆီးခံထားရ
သူက “အနည်းဆုံး ၆ ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ ၂ ဦးကတော့ ရွာကြီးမြှောက် ရပ်ကွက်က ဖြစ်ပြီး ရူပတောင်က တဦး၊ ရွာကြီးတောင်က ၁ ဦးနဲ့ ကျန် ၂ ဦးကိုတော့ မသိရှိရသေးပါ။” ဟုသူက ပြောသည်။သူတို့ကို အမှတ် (၁) ရဲစခန်းက ဒုရဲအုပ် ခင်မောင်လှ ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်သွားခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေကြောင်းကို သတင်းမရရှိကြောင်း သူကပြောသည်။ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာ ဦးဥတ္တမ ရုပ်ပုံပါ တီရှပ်များကို ၀တ်ဆင်သ ဖြင့် အနည်းဆုံး လူငယ် ၆ ဦးဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံ တဦးက ပြောသည်။ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သော သတင်းရပ်ကွက် အရ သူတို့ကို နေရာတခုတွင် ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးနေပြီး အထူးသဖြင့် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ရုပ်ပုံပါ တီရှပ်များကို မည်သူများက ဦးဆောင် ဖြန်ဝေခဲ့သည် ဆိုသည့်အချက်ကို မေးမြန်းနေကြောင်း သိရှိရသည်။
၎င်းအပြင် ရိုးမ ပန်းချီဆိုင်မှ လူငယ် တဦးကိုလည်း ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ရုပ်ပုံပါ အကျီ်ကို ၀တ်ဆင်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည် လွတ်ပေးခဲ့သည်။
ရခိုင်စည်တော် စိုင်းန္ဒြားတီးဝိုင်းမှလည်း အနည်းဆုံး လူငယ် ၃ ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ အကျီင်္နှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
စစ်တွေ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းက ဒုရဲအုပ် ခင်မောင်လှမှ ဦးဆောင်ပြီး ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ရုပ်ပုံပါ တီရှပ်များကို ၀တ်ဆင်သူများထံက လိုက်လံသိမ်းဆည်းနေပြီး စက်တင်္ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က လမ်းသွားလမ်းလာများကို တားပြီး ဦးဥတ္တမရုပ်ပုံပါ အကျီင်္များကို အတင်းချွတ်ခိုင်းကာ သိမ်ဆည်း ယူသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
စစ်တွေတွင် ရဟန်းတော်များ ဆန္ဒပြရန် စုရုံး အာဏာပိုင်များက တားဆီး
ယနေ့ နေ့လည်က ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ရဟန်းတော်များ စုရုံးပြီး ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အာဏာပိုင်များက လက်ဦးမှု ရယူကာ ဆန္ဒပြပွဲကို တားဆီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။အမည်မဖေါ်လိုသူ မျက်မြင် အမျိုးသမီး တဦးက “ရဟန်းတော် အပါး ၅၀ ခန့်က စစ်တွေ ဝေသာလီ အားကစားကွင်းမှာ စုရုံးပြီး ဆန္ဒပြဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတာပါ။ အာဏာပိုင်တွေက သတင်းရသွားပြီး အားကစား ကွင်း ကို ၀ိုင်းထားလိုက်တဲ့အတွက် ဆန္ဒပြ ချီတက်မယ့် အစီအစဉ် ပျက်သွားခဲ့ရပါတယ်။” ဟု သူမက ပြောသည်။
ထိုသို့ အာဏာပိုင်များက လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ၀ိုင်းထားလိုက်သဖြင့် ရဟန်းတော်များမှာ အစီအစဉ်ကို ရုတ်သိမ်းပြီး မိမိတို့ နေထိုင်ရာကျောင်းသို့ ပြန်သွားခဲ့ကြသည်ဟု သူမက ပြောသည်။
“ဖမ်းတာ ဆီးတာတွေတော့ မရှိပါဘူး။ အာဏာပိုင်တွေက လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်တာကလွဲလို့ လိုက်လံ ဖမ်းဆီးတာတော့ မပြုလုပ်ပါဘူး။” ဟု သူမက ပြောသည်။
ယခုတကြိမ် ရဟန်းတော်များ ဆန္ဒပြရန် စစ်တွေမှာ စီစဉ်ခြင်းမှာ သြဂတ်(စ်)နှင့် စက်တင်္ဘာလအတွင်း တတိယ အကြိမ်မြှောက်ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော လကလည်း နှစ်ကြိမ်တိတိ စီစဉ်ခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အာဏာပိုင်များက လက်ဦးရယူကာ ဖြိုခွဲခဲ့သဖြင့် ဆန္ဒပြမည့် အစီအစဉ်များမှာ ပျက်ပြားခဲ့ရသည်။
ယခုအခါ စစ်တွေတွင် လုံခြုံရေးကို ပိုမိုပြီး တင်းကျပ်ထားပြီး အရပ်ဝတ်ထောက်လှမ်းရေးများ၊ ရပ်ကွက် ကောင်စီများမှာလည်း နေရာတိုင်းတွင် အခြေအနေများကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဆူပူ အုံကြွမှုများ မဖြစ်စေရန် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆန်ဈေးကျအောင် အာဏာပိုင်များက ဆောင်ရွက်
ရခိုင်ပြည်သူလူထု၏ စစ်အစိုးရ အပေါ် မကျေနပ်မှုများ တိုးပွားနေမှုကို လျော့ချလိုသဖြင့် စစ်အစိုးရမှ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဆန်ဈေးများ ကျအောင် အထူးကြိုးစား ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်နေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။စစ်တွေမှ ကုန်သည် တဦးက “အခု ဆန်ဈေးတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ အထူးထိုးကျနေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ စစ်အစိုးရက ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို ပြည်မဘက်က ဆန်တင်သွင်းမှုကို ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောသည်။
ယခင်က ငစိန်နှင့် ဧည့်မထ ဆန်တအိတ်မှာ ကျပ် ၂၅၀၀၀ ထိမြှင့်တက်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ကျပ် ၁၅၀၀၀ သာရှိတော့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“အခုတလော ပြည်မြို့ဘက်က တင်ပို့တဲ့ ဆန်တွေ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို အကြီးအကျယ် ၀င်လာတဲ့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဆန်ဈေးတွေ ကျဆင်းသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ဈေးတွေ မကျဘဲနဲ့ ဆက်တက်နေရင်တော့ စစ်တွေမှာ အထွေထွေ မကျေနပ်တဲ့ လူထု အုံကြွမှုကြီး ပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သိတဲ့အတွက် ရခိုင်လူထု ကျေနပ်အောင် ဆန်ဈေးတွေကို မကျ ကျအောင် အစိုးရက ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင် နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟုသူက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယ အများဆုံး ဆန်စပါးထွက်ရာ ဒေသ တခုဖြစ်သော်လည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆန်စပါး ရှားပါးရခြင်းမှာ အစိုးရနှင့် ရခိုင် ဆန်ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းက ရခိုင်မှ ထွက်သော ဆန်များကို ၀ယ်ယူပြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ကို တင်ပို့ ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အာဏာပိုင်များက ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဆန်စပါးသယ်ယူခွင့်ကို လုံးဝ ပိတ်ပင်ထား သဖြင့် ဆန်ဈေးများမှာ မြို့နယ် တခုနှင့် တခုအကြားတွင် မတူညီဘဲ လူဦးရေ များသော မြို့များတွင် ဆန်ဈေးများ အဆမတန် မြှင့်တက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ စစ်အစိုးရက ပြည်မမှ ဆန်စပါးများကို ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းသို့ တံခါမရှိ ဓါးမရှိ တင်သွင်းခြင်း ပြုလိုက်သကဲ့သို့ အခြားတဘက်တွင်လည်း ရခိုင်ဆန်ကုန်သည်ကြီး အသင်းမှ ဘင်္ဂလာသို့ ဆန်တင်ပို့မှုကို တားမြစ်ထားလိုက်သဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲတွင် ဆန်ဈေးများ တဟုန်ထိုး ထိုးကျသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ပြည်သူကို အသားလွတ်စော်ကားတဲ့ အဓမ္မ၀ါဒီ ဗိုလ်မှူးကြီးရန်နောင်။
(၉.၉.၀၈) ရက်နေ့ ည (၆း၃၀) ခန့်တွင် SSC ရွှေဂုံတိုင် အထူးကုဆေးရုံတွင် ကားထွက်ပေါက်မှ ကားတစ်စီးဝင်လာသည်ကို ကားရှင်းလင်းရေးလုံခြုံရေးမှ တားမြစ်ရာတွင် အဆိုပါလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအား ကားပေါ်မှလူတစ်ယောက်မှ ဆင်းပြီး ထိုးကြိတ်ပါသည်။
၄င်းအချင်းအရာကိုမြင်သော ဆေးရုံလာပြသည့် သူတစ်ဦးမှ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး "၀န်ထမ်းက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောတာကို ဘာလို့ ထိုးရတာလည်း၊ မင်းလည်း ပိုက်ဆံရှိတယ် ငါလည်းပိုက်ဆံရှိတယ်၊ မင်းနဲ့ငါထိုးမလား " ဟု ၀င်ရောက်ပြောဆိုပါတယ်။
ထိုအခါ အဆိုပါ ကိုယ်ပိုင်ကား အမှတ် (၃က/၆၇၂၂) ကားပေါ်မှ အသက် (၄၀) ခန့် လူတစ်ဦးမှ ဆင်းလာပြီး "အဲ့ဒါ ငါ့ညီ မင်းဘာဖြစ်ချင်လို့လည်း၊ မင်းတို့ထက်မိုက်လို့ တပ်က လာတာ၊ ငါ့နာမည် ဗိုလ်မှူးကြီးရန်နောင် ကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ တိုင် ဂရုမစိုက်ဘူး"ဟု ပြောဆိုပါတယ်။ ဘေးမှကြည့်နေသောလူများ၊ ဈေးဆိုင်များမှ ဈေးရောင်းနေသူများမှ မခံမရပ်နိုင်ပဲ "အောက်ခြေလူတန်းစားကိုတော့ ဒီလိုမလုပ်သင့်ပါဘူး"ဟု ၀ိုင်းဝန်းပြောဆိုရာတွင်လည်း "မင်းတို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လည်း၊ ကြိုက်တဲ့ အရာရှိ သွားတိုင် ငါ့နာမည် ဗိုလ်မှူးကြီး ရန်နောင်" ဟု မိုက်ရိုင်းစွာ ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ရင် မိမိကိုယ်မိမိ စစ်သားဆိုပြီး၊ အောက်ခြေလူတန်းစားကို အနိုင့်ကျင့်စော်ကားချင်းမှာ မဖြစ်သင့်သောကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးမှကြည့်နေသော ပြည်သူအစစ်မှ ၀င်ရောက်ပြောဆို၍ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကာ ရိုက်နှက်မှု ဖြစ်ပွားပါက၊ ရိုက်နှက်သော လူတွင် အပြစ် မရှိပေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ကိုကျော်မင်းနိုင် လည်း ထို့ အတူပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်၍ စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ ဓားနှင့် ထိုးမိချင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးရန်နောင်လိုလူတွေရှိနေသ၍ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေက ဆက်ရှိနေဦးမည်ပင် ဖြစ်သည်။ ပြည်သူကကျွေးသောထမင်းကိုစား၍ ပြည်သူကို စော်ကားခြင်းသည် ထမင်းကျွေးသောလက်ကို ပြန်ကိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
စစ်သားဖြစ်တာနဲ့ ပြည်သူကို တရားဝင်စော်ကားခွင့် ရှိနေပြီလားဟု မေးရမလိုပင် ဖြစ်နေပေသည်။ ဗိုလ်မှူးကြီးရန်နောင်အား ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေးသင့်သည်ဟု မျက်မြင်တွေ့ရသော ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနှင့် ပြောကြားလိုပေသည်။
Canadian Experience Class About To Launch
September 08, 2008 05:00
The Tories will be implementing the long-awaited Canadian Experience Class (CEC) just weeks shy of the just-announced October 14th federal elections.
Qualified foreign workers and foreign students can apply for permanent residence under this program starting September 17, 2008
In January, I explained in this column, and supported, the government’s reasoning for creating this class.
The CEC will allow two different types of candidates to apply.
First, foreign students who graduate fromaqualifying Canadian educational program of at least two years in duration, who obtain at least 12 months of Canadian work experience in the two years prior to applying under the CEC, and who meet an English or French language benchmark can apply to remain here permanently. Provided they meet these requirements, they will no longer be measured under the 67-point system of our Federal Skilled Worker Program.
Second, the program will also allow foreign workers who have at least2years of legal Canadian work experience in occupations other than “lower-skilled” occupations within the 36-month period prior to submitting their CEC application, and who meet the language benchmark for their occupational skill level. Foreign workers who are employed inamanagerial or professional occupation will need to demonstrate “moderate” proficiency in one of our official languages while workers in technical occupations or skilled trades will need to demonstrate “basic” proficiency in French or English. Those workers whose occupations are listed in skill levels C & D of Canada’s National Occupation Classifications will simply be out of luck.
Minister Finley announced on Friday that the final regulations to be published will includearefinement over the draft rules originally published in August.
The original proposal required all applicants to be physically in Canada with lawful status in order to apply. However, this would have overlooked those who had met all of the CEC criteria but who had to leave Canada when their status here was about to run out.
The final rules will allow those who left Canada, but who completed their qualifying work and/or study here, to apply provided they do so within one year of completing their authorized Canadian work.
There is no question that this announcement can only haveapositive effect on those immigrants who qualify under this class. However, it completely overlooks this country’s need for workers in lower skilled occupations that Canadians employers can not fill and which most Canadians would rather avoid.
Traditionally, citizens of all countries take for themselves the higher skilled jobs and leave the less attractive ones to recent immigrants who have little choice but to do the less desirable work. Since we are increasingly favouring professional immigrants, I have but one question: Who will be doing the hard and dirty work that few us want but which is essential toaproperly functioning economy?